Io no lazon’ady
nampikolay ireo mpino tonga nivavaka nanatrika ny sorona masin’ny Papa Fransoa teny Soamandrakizay, omaly maraina.“Avy etsy amin’ny vavahady ambony Androhibe mankeny amin’ny vavahady ambany avy aty avaratra no nandehanana an-tongotra nandritra ny ora efatra mahery. Izahay anefa avy any Anosizato nihazo an’Androhibe, ora efatra teo koa. Tamin’ny sasakalin’ny sabotsy hifoha alahady izahay no niala tany Anosizato, tonga teo amin’ny vavahady ambony tamin’ny 4 ora maraina. Tamin’ny 8 ora vao tafiditra tao amin’ny vavahady ambany. Soa ihany fa tsy nosavaina tsirairay intsony nanomboka tamin’ny 7 ora. Io fisavana io no niteraka ilay fitohanana goavana”, hoy i Aimé Jocelyn, raim-pianakaviana. Nony tsy nosavaina tsirairay ny mpivavaka fa nampiseho ambony fotsiny ny tapakila fidirana dia nihazakazaka ireo mpilahatra ka vetivety dia nisava ilay filaharam-be nahatratra ana kilaometratra maro. Tsiahivina kosa anefa fa kanto ny fankalazana ny sorona masina tamin’ny fampanaraham-bolontany ireo hira sy dihy maha-Malagasy.